Famantarana 4 ianao dia empath intuitive (tsy empath fotsiny) - An-Tsaina
Famantarana 4 ianao dia empath intuitive (tsy empath fotsiny)
Matetika voalaza sy voasoratra fa ny empaths dia olona mora raikitra tokoa, ary marina ho an'ny sasany izany, saingy tsy misy na inona na inona milaza fa ny empath dia tokony ho intuitive, na ny intuitive dia tsy maintsy manana fangorahana lehibe.
Na dia hitan'ny sasany aza ireo teny na ampifandraisin'ny hafa amin'ny endriny hafa dia tena tsy hoe ny empaths rehetra dia intuitives fa tsy ny intuitive rehetra dia empaths.
Raha ny marina, ny fahaiza-manao roa - ny fiaraha-miory sy ny fahatsapana - dia samy hafa tanteraka amin'ny lafiny iray lehibe.
te halaina miadana izy
Jereo ny famaritana dia ho hitanao fa ny fiaraha-miory, amin'ny ankapobeny, ny fahaizana mahatsapa sy mahatsapa ny fihetsem-po sy ny herin'ny olon-kafa sy ny manodidina anao. Saika miseho ivelany sy miahiahy amin'ny zavatra hafa ankoatry ny tenanao izy io.
Ny fahiratan-tsaina, etsy ankilany, dia midika hoe mitodika any anaty sy mijery ny anao saina tsy mahatsiaro tena ary ny ‘fahatsapana tsinay’ hanombanana sy hahatakarana toe-javatra iray. Azo antoka fa miankina amin'ny fandraisana sy fanodinana izao tontolo izao manodidina anao izany, fa ny singa farany dia tena anaty.
Noho izany, ny fiheverana fa ny olona omena fangorahana avo lenta dia mitovy amin'ny fitahina amin'ny fahiratan-tsaina. Izy ireo dia lafiny miavaka amin'ny toetran'ny tena ary tsy tokony hatambatra ho toetra tokana.
Ka inona no atao hoe empathie intuitive?
Izy io dia olona manana fahaiza-miombom-pihetseham-po maneho ivelany amin'ny hafa ary mahatsapa fihetseham-po anaty ho amin'ny toe-javatra iray.
Amin'izany ao an-tsaina, ahoana no ahazoanao antoka fa empath intuitive ianao, na karazana empath hafa? Inona no mampiavaka ny iray hafa?
Ireto misy famantarana 4 fa empathà ianao manana fahaiza-misaina avo lenta.
1. Azonao atao ny milaza ny fahasamihafana misy eo amin'ny fihetsem-ponao sy ny an'ny hafa
Ny iray amin'ireo tolona lehibe atrehin'ireo empaths maro dia ny fanasoketana ny fahatsapan'ny olon-kafa ao an-tsainy sy ny vatany manokana. Mitambatra miaraka aminy ny angovo atiny ary mandoto ny renirano ao anatiny. Matetika izy ireo dia lasa toy ny manodidina azy satria tsy afaka milaza izay azy sy izay tsy.
Ohatra, raha mifanena amin'ny olona romotra izy ireo dia vao mainka tezitra raha mifanena amina olona mitaintaina izy, izany dia mamelona ny fanahiany manokana ary raha sendra alahelo any amin'ny hafa izy ireo, dia manjary malahelo amin'ny tenany ihany.
Hafa be mihitsy ho an'ny empath intuitive. Izy ireo dia mifanaraka tanteraka amin'ny toetrany anaty ka afaka manavaka mora foana azy io sy izay mety hilentika avy amin'ny manodidina azy ireo.
tsy mitia na inona na inona amin'ny fiainana
Tsy dia voakasiky ny fihetsem-pon'ny hafa izy ireo. Na dia mbola afaka mahatsapa sy mahatsapa ireo fihetsem-po ireo aza izy ireo dia tsy dia tsikaritra loatra ny fiatraikany amin'ny toe-panahin'izy ireo noho ny ho an'ny empaths hafa.
Tsara kokoa izy ireo amin'ny famoronana sakana azo zahana, saingy azo fehezina, eo anelanelan'ny zavatra tsapany sy ny an'ny hafa. Azon'izy ireo atao ny mamela ny roa hikambana raha irina, saingy azon'izy ireo atao ihany koa ny mitazona azy ireo misaraka.
2. Azonao atao ny mahita ireo fahatsapana mihoatra ny fahatsapana azy ireo
Na dia mamela anao mamantatra sy maneho ny fihetseham-pon'ny hafa aza ny fiaraha-miory, dia tsy afaka milaza aminao ny antony ahatsapan'izy ireo izany.
Ho an'ireo karazana empath-tsy intuitive dia mety hiteraka fisafotofotoana lehibe izany satria hiafara amin'ny fahatsapana zavatra tsy azon'izy ireo tsara na azavainy tsara.
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny olona manam-pahaizana, dia ny fahafahany mihemotra ary mijery zavatra amin'ny fomba fijery mivelatra, ary izany dia ahafahan'izy ireo mamantatra ireo rohy - na mivantana na tsy mivantana - eo amin'ny antony sy ny vokany.
Ny empathitive intuitive dia mahita zavatra izay tsy iarahan'ny empaths hafa avelany hisaina ny zavatra hitany ireo tsy fahatsiarovany azy ireo, ary manome azy ireo fahitana amin'ny antony mahatonga ny olona iray hahatsapa izany.
Tsy voatery hanao izany amin'ny fikasana saina izy ireo fa voajanahary voajanahary sy fahaiza-manao izay avy amin'ny fananana fangorahana sy fahatsapana be dia be.
Indraindray ny empath intuitive dia mety manana fahatakarana tsara kokoa ny fihetsem-pon'ny olona noho ny an'ny tena. Izany no antony lehibe mahatonga ny famantarana manaraka.
Lahatsoratra mifandraika (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Toetra mahatsiravina 13 tsy mampino an'ny olona tsy manam-pahaizana
Fomba 14 hihainoana tsara kokoa ny fahaizanao
'Mampihetsi-po' ve ianao sa karazana toetran'ny 'tsy manam-pahaizana'?
Famantarana 7 Ianao dia Empath Extroverted
Teny notsongaina 22 momba ny fahatsapana hanampiana anao hifandray aminao foana
Fomba 10 hananganana ny fiarovanao amin'ny aretina sy ny fanaintainana
3. Manampy ny olona hahatakatra ny fihetseham-pony ianao
Raha empath intuitive ianao dia misy vintana mety hitranga nanampy olona maro fantaro izay tsapany ary, ny tena zava-dehibe, ny antony ahatsapany izany.
Mety tianao ny miresaka amin'ny hafa momba ny fihetsem-pony, ny eritreriny, ny nofinofiny ary ny fiahiahiany. Toa azonao atao fotsiny ny ‘mahazo’ izay lazain'izy ireo anao na dia tsy tena azon'izy ireo atao aza izany.
Tahaka ny ankamaroan'ny olona, ​​mety efa niaina ny fahatsapana feno ianao nandritra ny androm-piainanao ary ireto dia voatahiry, miaraka amin'ny toe-javatra mifandraika amin'izany, ao anatin'ny tsy fahatsiarovanao. Ny fahaizanao mandinika no mahatsapa sy mahatakatra ireo famantarana nalefan'ity ampahan'ny sainao ity izay manaporofo fa sarobidy tokoa amin'ny famantarana ny antony mahatonga ny hafa hahatsapa fomba iray.
Tsy afaka mametraka ny tenanao amin'ny kirarony fotsiny ianao amin'ny fomba fijery ara-pihetseham-po, azonao atao ny mahatakatra ny anton'izany sy ny toe-javatra misimisy ihany koa. Manampy anao amin'ny fametahana sary amin'ny antsipiriany misimisy kokoa ireo ary manome azy ireo antony mety mahatonga ny fihetseham-pony.
4. Ianao no olona mankany amin'ny torohevitra sy torohevitra
Miaraka amin'ny fahaizan'izy ireo mahatakatra sy mankasitraka ny fihetseham-pon'ny hafa ary ny fironany hanana fijerin'ny vorona ny zavatra iray, ny empaths intuitive dia manome mpanolotsaina mety.
Mety ianao ilay olona nitodihan'ny hafa voalohany rehefa sendra olana izy ireo ary tsy mahita ny vahaolana amin'izany. Raha vantany vao niresaka taminy izy ireo, nahatsapa ny zavatra tsapan'izy ireo, ary nahatakatra ny antony mahatonga azy ireo hahatsapa izany, dia manana ny faran'ny farany ianao: ny fahaizanao mamorona.
Ireo manam-pahaizana dia mazàna ho olona mamorona ary ny fahaizany misaina ivelan'ny boaty dia midika ho mpamaha olana fakan-tahaka. Afaka manolotra fomba isan-karazany hanatonana ny toe-javatra ianao ary hanolotra ny tombony sy ny lafy tsaran'ny tsirairay.
Raha misy antoko fahatelo tafiditra, ny toetranao empath dia midika fa mahay miditra amin'ny kirarony ianao mba handinihanao ny fomba mety hamalian'izy ireo ny safidy omena anao - na dia mbola tsy nifanena tamin'izy ireo aza ianao ary mandeha fotsiny amin'izay nolazaina taminao .
Ireo rehetra ireo dia midika fa matetika ianao no antsoin'ireo namana sy mpianakavy mba hihaino sy hanome torohevitra. Lasa olona tsiambaratelo ianao amin'izay olona azon'izy ireo resahina miaraka ary olona fantany no hanome valiny mazava, fa mahasoa.
Hita eo aminao sy amin'ny fiainanao ve ireo famantarana ireo? Raha izany dia angamba empath intuitive ianao rahateo. Mametraha hevitra etsy ambany raha misy ianao.
ny fomba ahazoana aina amin'ny hoditrao
ny fomba fanaovana fotoana haingana kokoa any am-pianarana
famantarana ny simia eo amin'ny lahy sy ny vavy
rehefa misy narcissist te hiverina aminao
tiany aho fa tsy fantatro raha toa Azy